Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan-tsolika avy amin'ny JP Morgan | Tim Draper - Fikarohana momba ny vatana teraka
Fihaonana Tim Draper ao amin'ny Draper University
Nihaona tamin'ny Tim Draper aho tamin'ny fomba tena niova. Nanadihady an'i Sarika Batra aho, izay manana fandaharana amin'ny fahitalavitra ao amin'ny Sony Network. Sarika dia te-hihaona tamin'ny sakafo atoandro mba hampahafantatra ahy ny namako iray ary hanao drafitra fanadihadiana faharoa ho an'ny fampisehoana. Nolazainy tamiko fa hihaona aminy any San Mateo ao amin'ny Avenue 44 East 3rd.
Rehefa nandehandeha tany amin'ilay toerana aho, dia nahita tilikambo mitaiza mitabataba “Draper University” amin'ny litera tongotra 20 eo an-tampon'ny tranobe. Nijanona aho ary nahatsapa fa nivory tao amin'io trano io ihany izahay. Rehefa nanakaiky kokoa aho, teo am-baravarankely lehibe iray, dia nahita an'i Sarika sy ny mpiara-miasa aminy nandrakitra tafatafa tamina lehilahy tsara fitafiana sy tsara tarehy iray aho. Nipetraka teo ambony seza kitapo tsaramaso izy ireo tao amin'ny efitrano lehibe misy fahitalavitra fisaka amin'ny rindrina. Toerana tsy mahazatra amin'ny resadresaka amin'ny fahita amin'ny fahitalavitra ity, hoy aho anakampo.
Nisy sary lehibe roa teo amin'ny sisin'ny fidirana amin'ny trano, iray amin'ny Steve Jobs ary iray amin'ny Elon Musk. Nahaliana ahy toy ny tamin'ny asako miaraka amin'i Kevin Ryerson izany, efa nataonay ny fiainana taloha ho an'ny Jobs & Musk.
Mandeha: Tranom-pantavanandro any an-danitra i Thomas Edison | Elon Musk
Nipetraka mangingina tao ambadiky ny efitrano lehibe aho ary nijery raha nanohy ny resadresaka nifanaovany tamin'ilay lehilahy niakanjo tsara i Sarika. Rehefa tapitra ny resadresaka, dia tezitra tamiko Sarika ary nanapa-kevitra ny hanakaiky kokoa. Dia nampahafantariny ahy izany Tim Draper. Mbola tsy fantatro marina hoe iza izy. Sarika nilaza tamin'i Tim fa mpanoratra navoaka momba ny fikarohana momba ny vatana vaovao aho.
Ny fahitan'i Tim Draper momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Gaga aho fa nanomboka nizara ny heviny momba ny vatana vaovao indray i Tim. Nilaza izy fa nanana talenta voajanahary tao amin'ny matematika ary nanontany tena izy hoe avy aiza izany. Nizara izy avy eo fa ny fomba fiheviny dia miasa ao amin'ny tontolo ara-panahy, dia mandinika ny tetikasa tokony hatao mba hamoronana ny fisiana tsara eto amin'ny planeta eto an-tany. Tamin'io fotoana io i Tim dia nangataka indray ny hiverenantsika hiaraka amin'ny mpiara-miasa hanatanteraka drafitra natao tany amin'ny tontolon'ny fanahy teo amin'ny fiaramanidina.
Nihiaka aho hoe: “Tena izany no fiasa, izany no voalaza ao amin'ny bokiko!” Talohan'ny azoko nolazaina bebe kokoa dia nanohy ny heviny momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray i Tim ary namarana ny fehezan-teny hoe: "Tokony hampianatra fampianarana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray ianao ao amin'ny anjerimanontolo misy antsika."
Rehefa lasa i Tim dia nanazava i Sarika fa Tim dia iray amin'ireo kapitalista mpiadidy fahombiazana indrindra ao amin'ny Silicon Valley ary olo-malaza ao amin'io faritra io izy. Hoy izy: “Fantatrao ve fa sarotra ny mifanena aminy?”
Fifandraisan'i Tim Draper tamin'ny fiainana taloha tamin'i Thomas Edison | Elon Musk
Taty aoriana, fantatro fa ny orinasan'ny orinasa Tim DFJ Venture dia mpamatsy vola lehibe an'ny Tesla Motors an'i Elon Musk sy Musk's SpaceX. Araka ny nasongadin'i Tim dia mazàna isika miverina amin'ny vatana vaovao miaraka amin'ireo olona efa fantatsika sy niara-niasa taminy taloha. Niahiahy aho fa mpamatsy vola an'i Thomas Edison i Tim, satria i Elon Musk, voalaza tetsy ambony, dia efa fantatra fa ny fanambadiana ao amin'ny Edison.
Fantatro fa ny mpanohana ara-bola voalohany an'i Edison dia JP Morgan. Hitako ny endriky ny endriky ny tanora Morgan sy Tim Draper. Nandritra ny fivoriana nanaraka niaraka tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re, mpitari-dalana amin'ny alalan'i Kevin izay nampiseho ny fahafaha-manao ny fiainana taloha dia nanamarina fa i Tim Draper no toeran'i Morgan.
Ny fanamboarana ny vatana vaovao any Amerika Closet
Ny fihaonako amin'i Tim dia mampiseho tranga iray izay hitako imbetsaka. Any Etazonia, na dia firenena kristiana manana toerana maro anisa aza izy, dia gaga tsy tapaka aho hoe firy ny olona misokatra amin'ny fiheverana ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao sy ny isan'ny olona liana amin'ny fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, raha ampahafantariko azy ireo amin'ity asa ity. Manantena aho fa ny ohatra nomen'i Tim dia manampy amin'ny famoahana olona maro, toa azy, hiala ao anaty lalimoara.
Annette Lantos sy ny Reincarnation Anne Frank
Tiako ny manonona fa nitsidika ny manodidina aho fony mbola misy ny Draper University. Taona vitsivitsy talohan'izay dia nihaona tamin'i Annette Lantos, vadin'ny tara US Congressman Tom Lantos, ao amin'ny birao kongresy ao San Mateo. Ny tonelina vaovao ho an'ny Highway 1 ao amin'ny morontsirak'i San Mateo eo anelanelan'i Pacifica sy Half Moon Bay dia nomena anarana taorian'ny Tom Lantos.
Nolazain'i Annette fa tena liana amin'ny fihaonana an'i Barbro Karlen, izay fantatra fa ny fiverenany indray tamin'i Anne Frank, izay hita ao amin'ny lahatsary viraliny, Porofon'ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao. Nandamina fivoriana izahay sy Annette, Barbro ary izaho, izay natao tao amin'ny efitrano fivorian'ny biraon'ny kaongresy Tom. Izaho sy Barbro dia nandany efa ho adiny telo niaraka tamin'i Annette tao amin'io efitrano io, niaraka tamin'i Tom vadiny, nanondrika ny lohany tao amin'ny efitrano nanontany matetika hoe: "Vonona handeha ve ianao, ry malala?"
Tamin'ny faran'ny fihaonanay naharitra sy nahafinaritra, dia resy lahatra i Annette fa i Barbro dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Anne Frank. Manan-danja izany satria i Tom sy Annette Lantos dia tafavoaka velona tamin'ny Famonoana Tambabe. Avy eo dia nanasa anay i Annette mba hanao fampisehoana ho an'ny mahasoa ao Washington, DC, izay hiran'ny zafikeliny vavy ary hiaraka aminy amin'ny piano i Condoleezza Rice. Tao izahay sy Barbro no nihaona tamin'ny sekreteram-panjakana Condoleezza Rice. Nolazaiko tamin'i Dr. Rice fa George W. Bush no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Daniel Morgan. Hoy ny navaliny, "Eny, an'ny Revolisiona Amerikanina." Manana raharaham-piainana taloha ho an'ny Dr. Rice koa izahay.
Porofon'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao sy ny fandriampahalemana manerantany
Araka ny Anne Frank | Barbro Karlen (nitranga in-1) Ny fanahy dia afaka manova ny finoana, ny zom-pirenena sy ny firaisana ara-nofo amin'ny andavanandro, satria i Anne Frank dia nenjehin'ny Nazia tamin'ny maha-Jiosy azy, i Barbro kosa dia teraka tamina fianakaviana kristiana tany Suède. Ity fandinihana ity dia afaka manampy amin'ny famoronana fandriam-pahalemana manerantany, satria ny ankamaroan'ny fifandonana dia miorina amin'ny tsy fitovizan'ireo marika ara-kolontsaina ireo.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana amin'ny endriky ny endriky ny JP Morgan sy Tim Draper. JP Morgan dia nijaly tamin'ny toetry ny hoditra antsoina hoe rosacea, izay mety hifaneraserany rhinophyma, ary ny fanitarana tsy manintona ny orona amin'ny orona. I Morgan dia te-haka sary nandritra ny taona maromaro taorian'io noho io toe-javatra io. Tim Draper dia tsy mbola voan'ny aretin'ity aretina ity.
Ny fiainana taloha talenta: Nanamarika i Tim Draper fa manana talenta voaomana ho an'ny matematika izy, izay heveriko fa manana JP Morgan ihany koa. JP Morgan dia banky mpampiasa vola sy kapitalista manerantany, ary i Tim Draper kosa dia kapitalista matihanina manerantany.
Ny drafitra mandritra ny androm-piainana sy ny fifandraisana dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao: Namatsy vola an'i Thomas Edison i JP Morgan ary ny orinasa Tim Draper dia nanome vola an'i Elon Musk, izay fantatra fa ny vatana vaovao indray ao Edison. Ny iray amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'i Tim Draper dia nantsoina ho lohan'ny mpiara-miasa amin'ny laboratoara an'i Thomas Edison izay lasa mpitarika ny orinasa elektrika ao Edison. Raha te hahalala bebe kokoa dia mandehana any:
Trangam-panjakan'izao tontolo izao ao amin'i Charles Batchelor | Steve Jurvetson